Kedu ngwá ọrụ ntanetị nke Amazon nwere ike inyere gị aka ịmalite azụmahịa azụmahịa gị?
Tupu ịmalite ịzụ ndị ọrụ gị na Amazon, ịkwesịrị ịmara ụfọdụ iwu na atụmatụ ndị dị mkpa ịghọ onye na-arụ ọrụ na egwuregwu asọmpi egwuregwu a.
Amazon bụ nzụkọ ahịa zuru ụwa ọnụ maka ndị nwe ụlọ ahịa n'ịntanetị iji mee ka ndị ahịa ha gbasaa ma mee ka ha nweta ego ha niile. Otú ọ dị, tupu ịmalite njem ịzụ ahịa na nke a dị oke egwu na nke bara uru, ka anyị zaa ụfọdụ ajụjụ banyere isi ihe dị na isi ihe a ma chọpụta ngwaọrụ kwesịrị ekwesị nke Amazon iji kwadebe azụmahịa gị maka ịga nke ọma.
Ihe dị mkpa maka ịzụta na nhazi usoro Amazon
Mgbe onye na-enyocha ntinye ajụjụ na igbe nyocha Amazon, ọ na-enweta ndepụta nke kachasị mkpa ajụjụ ya na ngwaahịa. Mgbe ahụ, ọ na-agagharị na otu n'ime ibe ngwaahịa ahụ ma pịa na "njikọ" rịọ n'okpuru nkọwa ngwaahịa iji hụ ọtụtụ n'ime atụmatụ ndị dị na ngwaahịa a.
Ọzọkwa, Amazon na-enye ndị ọrụ ikikere iji mezue maka "Buy Buy." Dị ka data ndekọ data, ihe karịrị ijeri dollar 62 ga-esi na igbe ịzụta. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji mara otú o si arụ ọrụ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ịzụta igbe bụ kaadị azụmaahịa nke a na-etinye na ibe ngwaahịa nke ndị ahịa nwere ike ịmalite usoro ịzụta.
Ọ bụghị ngwaahịa niile nwere ike ịpụta na Buy Box ka Amazon na-ahọrọ naanị ndụmọdụ kachasị mma na ahịa iji hụ na onye ahịa ga-azụ ya. Iji nweta Ahịa Amazon Buy, ịkwesịrị inye ndị ahịa gị ezigbo ego dị na ahịa, nwee ezigbo nzaba, mbupu n'efu, na ihe oyiyi.
Ọ bara uru ịsị na ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya iche na saịtị gị ga-aga ịkwado elu iji ghọọ onye na-ere ya. Ịkwesiri ịrụ ọrụ siri ike ọ bụghị nanị na njirimara njirimara Amazon gị ma n'okpuru usoro ecommerce kasị mma iji merie ndị ahịa ọhụrụ. Ihe ndị nwere ike imetụta ngwaahịa gị dị na ọkwa na ike ịmepụta Buy Buy gụnyere:
Ọnụahịa mgbagwoju anya
Ọ bụ echiche dị mgbagwoju anya nke na-agụnye ma ngwaahịa ma ego . Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na-emetụta ọnọdụ gị na ntụgharị..
Onyinye kasị mma
Iji rịgoro na TOP, ịkwesịrị inye ndị ọrụ Amazon onyinye kachasị mma n'ahịa gị.
Onye na-ere ahịa Amazon dị n'ahịa
Ndị ahịa na-ere ahịa ugbu a bụ ndị nwere ọmarịcha akụkọ ọdịnala na Amazon na-enwe ohere ịnweta otu n'ime ebe kachasị elu.
Ọnụ ọgụgụ na mma nke nyocha ndị ahịa
Nyocha dị mma n'ịntanetị bụ ihe ọzọ dị mkpa na Amazon. Ha nwere mmetụta dị ukwuu n'ịzụ ahịa ma nwee ike inyere gị aka ịmepụta igbe.
Ugbu a, mgbe i nwere echiche nke otu ọrụ usoro ọrụ Amazon si arụ, ị nwere ike ịmalite ịzụlite azụmahịa gị na ecommerce na ikpo okwu a. Otú ọ dị, iji mee ka usoro a dị mfe na imepụta ihe, ị ga-ama nke ngwaọrụ ngwá ọrụ Amazon nwere ike imezu mkpa azụmahịa gị.
Ngwaọrụ ọkachamara nke Amazon
Ejiri ngwá ọrụ a nyere gị aka soro ebe ngwaahịa gị maka ọkwa dị iche iche echekwara. Ngwá ọrụ nchedo a ga-enyere gị aka ịchekwa oge dị ukwuu ma nye gị nsonaazụ kachasị mma. Ọ ga-enyekwa gị nghọta nke ọma ma mgbanwe ndị ị mere, mee ka ọnọdụ gị dị elu ma ọ bụ. Ọzọkwa, ị ga-enwe ike soro gị asọmpi ọkwa ọnọdụ.
Ejiri ngwaọrụ a iji meziwanye ebe Amazon gị SEO na-eji ụgbọ okporo ígwè eme ihe na ngwaahịa gị. Ọ na-enyere aka ịwelite ọnọdụ Amazon gị na Google SERP ma kpoo ya okporo ụzọ. Ọzọkwa, ịzụta ndebanye aha Shemalt maka ngwá ọrụ a ị ga-enweta ihe ndị na-ere ahịa na-emepụta ihe ndị dị na isiokwu, njikọ ntanetị njikọ dị irè na ịkwado ọnọdụ dị mma Source .